The Rohingya News Bank : fortify Rights
Showing posts with label fortify Rights. Show all posts
မြန်မာက စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက် တရားရေးလမ်း ကြောင်း ဖြစ်လာဖို့ရှိ
မောင်သစ်ဆင်း (ဝါရှင်တန် ဒီစီ)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံကို ထွက်ပြေးနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ၂၀၁၇၊ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ်
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) ရဲ့ အခုလတ်တလော ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်ရာဇဝတ်မှု၊ လူသားအဖြစ်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ရာဇဝတ်မှု၊ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုတွေ ကျူးလွန်ခံခဲ့ကြရသူတွေအတွက် တရား ရေး လမ်းကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာဖွယ်ရှိပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ စစ်တပ် အာဏာသိမ်းအပြီး ရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ အမတ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ က မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ၂၀၀၂ ခုနှစ်ကစပြီး ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုအားလုံးကို စစ်ဆေးဖို့ လက်ခံလိုက်တာရဲ့ မူဝါဒ အပြောင်းအလဲအကြောင်း ဩဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့က ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
Labels: 2021, fortify Rights, ICC, mm, NLD, NUG, Rome Statute, စစ်ရာဇဝတ်မှုယ သတင်း, မြန်မာ
ရိုဟင်ဂျာအရေး လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ Fortify Rights နဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ အထက်အမိန့်အရ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ရာနဲ့ချီပြီး သတ်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်လို့ ဝန်ခံထားတဲ့ မြန်မာတပ်သားနှစ်ယောက် ပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်၊ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု မရှိကြောင်း မြန်မာဘက်က ICJ နိုင်ငံတကာ တရားရုံးမှာ လျှောက်လဲခဲ့တာဟာ မမှန်ကန်ကြောင်း ပြရာရောက်တယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှား မှုအဖွဲ့ Fortify Rights က ပြောပါတယ်။
ဒီ မြန်မာတပ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့ အခြေအနေကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ Fortify Rights အဖွဲ့ ရဲ့ တည် ထောင်သူ Matthew Smith ကို RFA ဝိုင်းတော်သား ကိုရဲခေါင်မြင့်မောင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
Labels: 2020, fortify Rights, mm, Video, ရိုဟင်ဂျာ, လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့, သတင်း
International Criminal Court: Prosecute and Offer Witness Protection to Myanmar Army Deserters
Two Myanmar Army soldiers now in ICC custody in The Hague
(BANGKOK, September 8, 2020)—The International Criminal Court (ICC) should swiftly prosecute two Myanmar Army soldiers who confessed to their involvement in massacres, rape, and other crimes against Rohingya in Myanmar, and the court should facilitate witness protection for them, said Fortify Rights today. Fortify Rights has reason to believe Myanmar Army Private Myo Win Tun, 33, and Private Zaw Naing Tun, 30, are in the custody of the ICC and in The Hague.
“This isamonumental moment for Rohingya and the people of Myanmar in their ongoing struggle for justice,” said Matthew Smith, Chief Executive Officer at Fortify Rights. “These men could be the first perpetrators from Myanmar tried at the ICC, and the first insider witnesses in the custody of the court. We expect prompt action.”
Labels: 2020, en, fortify Rights, ICC, Myanmar Army, News, Report
ရိုဟင်ဂျာသတ်ဖြတ်မှု စစ်သားနှစ်ဦးထွက်ဆိုချက် ယုံကြည် ရလောက် (Fortify Rights)
09 စက်တင်ဘာ၊ 2020
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့မှာ တပ်စွဲထားတဲ့ မြန်မာ့စစ်တပ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ။ (သြဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇)
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်ဆင်ရေးတွေအတွင်း ရိုဟင်ဂျာတွေကို အစုအဝေးလိုက် သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ တခြားရာဇဝတ် မှုတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စစ်သားနှစ်ဦးရဲ့ ထွက်ဆိုချက်တွေဟာ ယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့ ထွက်ဆိုချက် တွေဖြစ်တယ်လို့ Fortify Rights လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ရဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Matthew Smith က ဗွီ အိုအေကိုပြောပါတယ်။
Labels: 2020, fortify Rights, ICC, Matthew Smith, mm, The Hague, မြန်မာစစ်သား, သတင်း
ရိုဟင်ဂျာမှုမှာ ပတ်သက်သူ မြန်မာစစ်သား ၂ ဦး ICC စစ် ဆေးဖို့ Fortify Rights တိုက်တွန်း
08 စက်တင်ဘာ၊ 2020
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်ဆင်ရေးတွေအတွင်း ရိုဟင်ဂျာတွေကို အစုအဝေးလိုက် သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ တခြားရာဇဝတ် မှုတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စစ်သားနှစ်ဦးရဲ့ ထွက်ဆိုချက်တွေဟာ ယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့ ထွက်ဆို ချက် တွေဖြစ်တယ်လို့ Fortify Rights လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ရဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Matthew Smith က ဗွီ အိုအေကိုပြောပါတယ်။
Labels: 2020, fortify Rights, ICC, mm, မြန်မာစစ်သား, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း
ဘာဆန်ချာကျွန်းက ရိုဟင်ဂျာတွေကို ပြန်ခေါ်ဖို့ Fortify Rights အဖွဲ့ တိုက်တွန်း
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရောက် ဒုက္ခသည်တွေကို ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားမယ့် Bhashan Char ကျွန်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကတွေ့ရစဉ် Photo: Polash SHIKDER / AFP
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရအနေနဲ့ ဘာဆန်ချာကျွန်းမှာ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ သုံးရာကျော်ကို လွှတ်ပေး သင့် တယ်လို့ Fortify Rights လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့က ဒီကနေ့ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန် ပြောကြားလိုက် ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် ၁၅ ဦးရဲ့ ထွက်ဆိုချက်အရ အဲဒီကျွန်းမှာရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ လွတ်လပ်စွာသွားလာ ခွင့် မရှိသလို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေလည်း ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Labels: 2020, fortify Rights, mm, ပြန်ခေါ်ရေး, ဘာဆန်ချာကျွန်း, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း
Lift internet blackout, protect freedom of expression
Fortify Rights on Friday said Myanmar authorities should immediately release Myat Hein Tun and Kyaw Lin, two student leaders of the Rakhine Students’ Union imprisoned for protesting internet restrictions in Rakhine and Chin states. Photo: Collected
Fortify Rights on Friday said Myanmar authorities should immediately release Myat Hein Tun and Kyaw Lin, two student leaders of the Rakhine Students’ Union imprisoned for protesting internet restrictions in Rakhine and Chin states.
Labels: 2020, en, fortify Rights, Internet, News, Protect Freedom
စစ်ရေယာဉ်ပေါ်မှာ နှိပ်စက်ခံရတဲ့ အရပ်သား ငါးဦးကိစ္စ ကာချုပ်အမိန့်နဲ့ စုံစမ်းနေပြီ
တပ်မတော် သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းကို ၂၀၂၀၊ မေ၂၂ ရက်နေ့ ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ တွေ့ရစဉ်
ရခိုင်ပြည်နယ်က အရပ်သား ငါးယောက်ကို အေအေနဲ့ ဆက်နွယ်တယ်ဆိုတဲ့ သံသယနဲ့ စစ်ရေယာဉ်ပေါ် မှာ တပ်မတော်သားတွေ က ရိုက်နှက်ထိုးကြိတ်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကိုယ် တိုင်က ဒီကိစ္စကို အလေးထားပြီး အမြန်ဆုံး စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ တပ်မတော် သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
ဒီနေ့ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ တပ်မတော် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ RFA ရဲ့မေးခွန်းကို ပြန်လည်ဖြေကြား စဉ် ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Labels: 2020, fortify Rights, ICJ, mm, ဂူတာပြင်, စစ်ရောယာဉ်, နှိပ်စက်မှု, သတင်း
Release detained refugees: rights body to Malaysia
Regional rights body 'Fortify Rights' has called for Malaysia to release detained refugees and prevent arbitrary detention of new arrivals to minimise health risks due to Covid-19.
"Malaysia should take extra precautions now to protect the rights of refugees and refrain from detaining them," said Matthew Smith, chief executive officer of Fortify Rights, inastatement today.
"Detaining refugees after they passaquarantine and duringapandemic would be irresponsible and inhumane," he said.
Labels: 2020, Detained, en, fortify Rights, Malaysia, News, Pres Release, Refugee
Restore full citizenship rights for Rohingyas
Fortify Rights urges Myanmar govt
The government of Myanmar should take steps to urgently restore full citizenship rights for Rohingyas, Fortify Rights said yesterday.
New evidence collected by Fortify Rights, including eyewitness testimonies and internal government documents, confirms that Myanmar authorities are continuing to force and coerce Rohingyas to accept National Verification Cards (NVCs), which effectively identify them as foreigners and strip them of access to full citizenship rights.
“The NVC is widely known as an abusive tool, and the government should scrap it without delay,” said Matthew Smith, chief executive officer of Fortify Rights.
Labels: 2020, en, fortify Rights, Full Citizenship, News, Rohingya
လူမျိုးတုံးရှင်းလင်းရာရောက်တဲ့လုပ်ရပ်တွေ ကျူးလွန်နေဆဲ ပဲလို့ Fortify Rights ထုတ်ပြန်
White Card ခေါ် ယာယီသက်သေခံ လက်မှတ်များ ၂ဝ၁၅ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးကြောင်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ကြေညာပြီးနောက် White Card ပြန်လည်အပ်နှံပြီးကြောင်း အထောက်အထားစာရွက်ကိုင်ဆောင်ထားသည့် ရိုဟင်ဂျာတစ်ဦး။
Screenshot: Fortify Rights
ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်တွေအပေါ် လူမျိုးတုံးရှင်းလင်းရာရောက်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွဲဆို ချက်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး ICJ မှာ တရားစွဲဆိုထားပေမယ့် ရခိုင်ပြည် နယ်မြောက်ပိုင်း ဘူးသီးတောင်မှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာတွေ ဆက်လက် ကျူးလွန်နေ တယ်လို့ Fortify Rights အဖွဲ့က မနေ့က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
Labels: 2019, fortify Rights, mm, RFA Burmese, ထုတ်ပြန်, လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု, သတင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာတွေ ဆက်လက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ Fortify Rights အဖွဲ့ရဲ့ ၂ဝ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ချက်ကို တွေ့ရစဉ်
ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်တွေအပေါ် လူမျိုးတုံးရှင်းလင်းရာရောက်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွဲဆို ချက်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး ICJ မှာ တရားစွဲဆိုထားပေမယ့် ရခိုင်ပြည် နယ်မြောက်ပိုင်း ဘူးသီးတောင်မှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာတွေ ဆက်လက်ကျူး လွန်နေ တယ်လို့ Fortify Rights အဖွဲ့က မနေ့က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
Labels: 2019, fortify Rights, mm, RFA Burmese, ထုတ်ပြန်, သတင်း
Bangladesh: Halt Plans to Relocate Rohingya Refugees
Saturday, 26 October 2019,
Bangladesh: Halt Plans to Relocate Rohingya Refugees to Isolated Island
Testimonies indicate relocations slated for next month would be involuntary
(BANGKOK, October 25, 2019)—The Government of Bangladesh should immediately halt plans to relocate Rohingya refugees from camps in Cox’s Bazar to Bhasan Char, an isolated and flood-prone island in the Bay of Bengal, Fortify Rights said today. On October 20, Bangladeshi officials announced plans to begin relocating refugees in early November.
Fortify Rights interviewed 14 Rohingya from three different refugee camps in Bangladesh, including Rohingya identified on lists of people slated for imminent relocation to Bhasan Char. None of those on the lists for relocation interviewed by Fortify Rights had been consulted about the plan and all opposed it.
“The island is notasustainable solution for refugees and no one knows that better than the Rohingya themselves,” said Matthew Smith, Chief Executive Officer at Fortify Rights. “Threats of forced relocation cause unnecessary harm to refugee families already struggling to survive. Bangladesh authorities should engage in meaningful consultations with Rohingya and identify options to ensure rights and protection.”
Labels: 2019, en, fortify Rights, News, Press Release
Report: Rohingya Refugees Suffered Crimes Against Humanity in Massive Human Trafficking Scheme.
Malaysian forensic team members inspect remains found in an unmarked grave outside Wang Kelian, Malaysia, near the border with Thailand, May 26, 2015.
A human trafficking syndicate committed crimes against humanity between 2012 and 2015 against Rohingya and Bangladeshi refugees trying to flee to Malaysia and Thailand, two Southeast Asia-based human rights groups said inareport on Wednesday.
In the joint 121-page work titled “Sold Like Fish,” the Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM) and the Bangkok-based Fortify Rights provides accounts of survivors who were deceived by the traffickers, believing they were boarding boats to seek refuge abroad.
Labels: 2019, crimes against humanity, en, fortify Rights, Human Traffick, Myanmar, RFA English, Rohingya Refugee, Royal Commission of Inquiry, SUHAKAM
Malaysia: Ensure Accountability for Mass Graves, Human Trafficking Atrocities Against Rohingya
Report finds trafficking syndicate committed crimes against humanity
(KUALA LUMPUR, March 27, 2019)—Inanew joint report released today, the Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM) and Fortify Rights find reasonable grounds to believe thatahuman-trafficking syndicate committed crimes against humanity in Malaysia and Thailand against Rohingya men, women, and children from 2012 to 2015.
The 121-page report follows the Government of Malaysia’s recent creation ofaRoyal Commission of Inquiry to investigate human trafficking and mass graves—believed to contain the bodies of trafficked Rohingya and Bangladeshis—discovered in Wang Kelian, Perlis State in 2015. The Royal Commission of Inquiry is expected to submit its final report in June.
Labels: 2019, Atrocities, en, fortify Rights, Human Traffick, Press Release, Rohingya
Traffickers committed crimes against humanity by enslaving and killing Rohingya, say rights groups.
Thousands of Rohingya were crammed onto dangerous boats by traffickers CREDIT: ADIB CHOWDHURY/AFP
uman trafficking gangs are guilty of crimes against humanity for their brutal treatment of vulnerable Rohingya refugees trying to flee to Thailand and Malaysia, say human rights groups who releasedaharrowing new investigation on Wednesday.
Labels: 2019, Burma Border, en, fortify Rights, Malaysia, Myanmar, News, Rohingya, Thailand, The Telegraph, Trafficking, UN_HRC, Women Trafficking
ARSA ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အနေနဲ့ သူတို့ဖမ်းထားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေကို အမြန်ဆုံးပြန် လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ ကျပန်းဖမ်းဆီးတာ နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းတာတွေ မလုပ်ဖို့အပြင် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့်နဲ့ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ကို အကာကွယ်ပေးဖို့ Fortify Rights လူ့အခွင့်ရေးအဖွဲ့ကြီးက ကြာသပတေးနေ့မှာ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။
Labels: 2019, ARSA, Cox's Bazar, fortify Rights, mm, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ရိုဟင်ဂျာ
မလေးရှားရောက် ရိုဟင်ဂျာ မိန်းကလေးတွေ ဘ၀လုံ ခြုံမှုလိုအပ်
ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ Kutupalong ဒုက္ခသည်စခန်းက ရိုဟင်ဂျာမိန်းကလေးငယ်များ ရေအိုးသယ်နေစဉ် (နိုဝင်ဘာ၊ ၁၉၊ ၂၀၁၇)
မလေးရှားနိုင်ငံရောက်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာမိန်းကလေးငယ်တွေ အတင်းအကြပ်အိမ်ထောင်ပြုခိုင်း ခံရ တာ မျိုးတွေကို အကာအကွယ်ပေး အရေးယူဖို့ Fortify Rights လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့က မလေးရှားအာဏာ ပိုင်တွေကို တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
Labels: 2019, CEDAW, fortify Rights, Kutupalong, mm, UN, UNHCR, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, မလေးရှား, ရိုဟင်ဂျာ